တိုက်ကြီးတိုးဂိတ်ကို အရှိန်လွန် ဝင်တိုက်သည့် YBS ယာဉ်မီးလောင်၊ သံဃာနှစ်ပါး အပါအဝင် ခရီးသည် ၁? - Yangon Media Group
တိုက်ကြီးတိုးဂိတ်ကို အရှိန်လွန် ဝင်တိုက်သည့် YBS ယာဉ်မီးလောင်၊ သံဃာနှစ်ပါး အပါအဝင် ခရီးသည် ၁?
တိုက်ကြီး တိုးဂိတ်အသစ်ကို ဘရိတ်ပေါက်ပြီး အရှိန်လွန်ဝင်တိုက်ခဲ့သည့် YBS ယာဉ်သည် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယာဉ်ပေါ် စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် သံဃာနှစ်ပါး အပါအဝင် ခရီးသည် ၁၉ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက် ကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည် ကား လမ်းအတိုင်း ရန်ကုန်မှ တိုက်ကြီး သို့ ယာဉ်မောင်း(စုံစမ်းဆဲ)မောင်း လာသည့် YBS 90 ခရီးသည်တင် မီနီဘတ်စ်ယာဉ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ မိနစ် ၅ဝ က မိုင်တိုင်အမှတ် (၄၄/၂ ဖာလုံ) နှင့် (၄၄/၃ ဖာလုံ)ကြား အရောက် တာခွကျေးရွာအတွင်း အသစ် ဆောက်လုပ်နေသည့် တိုက်ကြီးတိုးဂိတ်အား ဘရိတ်ပေါက်ရာမှ ဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့ပြီး ကားခေါင်းခန်းရှိ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းပေါက်ပြီးအနီးရှိ ဝိုင်ယာကြိုး အပူလွန်ရာမှ မီးပွားဖြစ်ကာ ကားမီးလောင်ခဲ့ ကြောင်း တိုက်ကြီးမြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ကားမီးလောင်မှုကို တိုက်ကြီး မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးငြှိမ်း သတ်ယာဉ် သုံးစီးဖြင့် သွားရောက် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ ခန့်တွင် မီးငြိမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ကား တစ်စီးလုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ကျပ် ၁၈ သိန်းခန့်ရှိကြောင်း တိုက်ကြီးမြို့ နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ တိုက်ကြီးမြို့နယ်မီးသတ်တပ် ဖွဲ့မှ ဒုတိယမီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးနိုင်ဦးက ”ကားက အရှိန်နဲ့လာရင်းနဲ့ တိုးဂိတ်ကကျဉ်းတော့ အရှိန်နဲ့ဝင် လို့မရတော့ ဘရိတ်အုပ်လိုက်တာ ဘရိတ်ကပေါက်ပြီးတော့ လုံးဝဝင် လို့မရတော့ ညာဘက်ခြမ်းက အုတ် ခုံကို ဝင်တိုက်ရင်း မီးလောင်သွား တာ။ အဲ့ဒီမှာ ကားခေါင်းခန်းမှာ ရှိတဲ့ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းပေါက်ပြီးတော့ ဝိုင်ယာကြိုးကနေ ပူပြီးတော့ မီးပွား ဖြစ်တယ်။ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းပေါက် ရာကနေ မီးစတင်လောင်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့သွားတော့ ကားက ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အကုန်လုံး လောင်နေပြီ။ ဆိုဖာခုံတွေက အ ကုန်လောင်နေပြီ”ဟု ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ ပြောသည်။
ခရီးသည်ယာဉ်ပေါ်တွင် ယာဉ် မောင်းအပါအဝင် ခရီးသည်အမျိုး သမီး ၁ဝ ဦး၊ အမျိုးသား ခုနစ်ဦး နှင့် သံဃာနှစ်ပါးတို့ လိုက်ပါစီးနင်း လာကြောင်း၊ ယာဉ်တိုက်ပြီးနောက် ခရီးသည် ၁၉ ဦးစလုံး မစိုးရိမ်ရ ဒဏ်ရာများ ရရှိပြီး တိုက်ကြီးဆေး ရုံ၌ ကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်းမှာ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်နေကြောင်း ¤င်းက ပြော သည်။ ယင်းမီးလောင်မှုနှင့်ပတ်သက် ပြီး တိုက်ကြီးမြို့မရဲစခန်းတွင် မီးလောင်မှုပုဒ်မ၊ ယာဉ်တိုက်မှုပုဒ်မ၊ လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုပုဒ်မတို့ဖြင့် ယာဉ်မောင်းကို အမှုဖွင့်အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့် ဆန်များအပေါ် အီးယူ၏ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေး ရုပ်သိမ??
မြန်မာ့ဆန် စံချိန်စံညွှန်းမူကြမ်းရေးဆွဲမှု ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီး
မသန်စွမ်းသူများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ရပ်တည်ရေးနှင့် အမှီကင်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်အကိ
ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကို တစ်ကျော့ပြန် ဒေးဗစ်မိုယက်စ် ကယ်တင်နိုင်မှာလား
ဂျွန်လင်နွန်အတွက် သေနတ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ပေါလ်မက္ကာနေ
မန္တလေးမြို့တွင် ပန်းပုနည်းပြဆရာ၊ ဆရာမခုနစ်ဦး စုပေါင်း၍ ခေတ်ပြိုင် ပန်းပုပြပွဲ ပြသ